I-Krabi Beach Front Villa kufutshane ne-AoNang - I-Airbnb
I-Krabi Beach Front Villa kufutshane ne-AoNang
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguKrabi Riviera
Ukusuka apha, unokuthatha enye yee-kayak ezimbini ze-villa kunye ne-paddle ukuya kwi-Railay Beach eyaziwayo yehlabathi, imizuzu eyi-15 nje; okanye singalungiselela isikhephe esine-longtail okanye i-speedboat ukukuthatha kwi-villa ukuze sikukhuphele eziqithini.
I-Absolute beachfront villa ngaphakathi kokufikelela ngokulula kuzo zonke iindawo ezinomtsalane kubakhenkethi. Ukulala ukuya kwi-8 - 10 iindwendwe.
Nceda uqaphele ukuba iindawo zokulala kule villa zenzelwe iindwendwe ezi-8.
Ngomrhumo, iimatrasi ezi-2 ezongezelelweyo zinokusekwa emgangathweni ukonyusa inani eliphezulu leendwendwe ukuya kwi-10.
Ilungele: imitshato yabucala, ukudityaniswa kosapho, iindawo zolonwabo
Ukuba ubukhangela eyona villa ifanelekileyo elunxwemeni, akufuneki ujonge phambili: Indlu yaseBeach eKrabi yiyo. I-villa ibekwe ngqo kwisanti yonxweme lwabucala, kodwa inokufikelela lula kwindlela. Yongeza kule chibi labucala elingenasiphelo kunye namagumbi anolwandle olungenakulinganiswa nanto ku-2,000 m² anemihlaba enomhlaba ogcweleyo, kuquka nemithi yeziqhamo kunye nemibono yeentaba kwaye unazo zonke izithako zeholide yomlingo.
Indlu yaseBeach yenzelwe ubumfihlo, ubuhlobo obusondeleyo kunye nokuthuthuzela kwaye ibonisa i-500 m² isicwangciso somgangatho, kunye nabantu aba-4, iisuti ezinomoya ezibekwe kufutshane nombindi, indawo yokuhlala evulekileyo kunye nendawo yokutyela kunye ne-TV / igumbi leendaba.
I-master "honeymoon" suite ibekwe kwindawo ephambili, ekufutshane nolwandle kunye nokufikelela ngokuthe ngqo kwi-swimming pool ukusuka kwi-terrace. Isilingi yecathedral kunye neefestile ezigcweleyo eziphakamileyo zenza isakhelo esinomtsalane semibono yepanoramic, enokubonwa nakwibhafu yeJacuzzi ejikelezayo yegumbi lokuhlambela.
Igumbi lokulala lesibini libekwe kwelinye icala ledesika ebanzi ngaphambili kwe-villa, ikwanegumbi lokuhlambela le-en-suite, indawo yokunxiba kunye neefestile zemifanekiso.
Igumbi lokulala lesithathu kunye nelesine le-en-suite abekwe ngasemva kwe-villa, enye iphezulu kwaye enye ikumgangatho osezantsi, nangona uyilo olukrelekrele luqinisekisa ukuba nala magumbi ayaxhamla kwiimbono ezigqwesileyo. Igumbi lokulala eliphezulu linebalcony ejonge elwandle. Onke amagumbi okulala aza kunye nebhedi yobukhulu bokumkani kwaye angasebenza njengomatrasi omnye o-2 owongezelelweyo kubantu ababini.
Ikhitshi lesiqithi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye negumbi lokutyela elidibanayo lisebenza njengendawo edibeneyo yokuhlangana, kwakhona enembono phezu kwamanzi. Kukwakho indawo eninzi yangaphandle: umgangatho ojikeleze idama elinezinyuko ezikhokelela ezantsi kwiigadi ezinomhlaba ezijongene nolwandle.
Ukusuka apha, unokuthatha enye yee-kayak ezimbini ze-villa kunye ne-paddle ukuya kwi-Railay Beach eyaziwayo yehlabathi, imizuzu eyi-15 nje; okanye singalungiselela isikhephe esine-longtail okanye i-speedboat ukukuthatha kwi-villa ukuze sikukhuphele kwiziqithi eziselundini. I-Beach House yindawo yokuhlala enenkonzo ngokupheleleyo, enikezela zonke iinkonzo zokutyikitya: i-concierge ekufowuneni ukulungiselela uhambo, ukuhanjiswa kwesikhululo seenqwelomoya, inkonzo ye-tuk-tuk engenasiphelo ukuya nokusuka e-Ao Nang ukuya kuthenga kunye nokutya, kunye ne-villa yabucala yompheki kunye neenkonzo zokuphulula. (intlawulo eyongezelelweyo iyasebenza).
I-villa ibucala kakhulu. Kukho i-resort encinci enokuthi ifikeleleke ngemizuzu emi-5 yokuhamba elunxwemeni. Indawo yokutyela ibonelela ngokutya kwaseThailand kunye nokutya kwaselwandle kwisidlo sasemini kunye nesidlo sangokuhlwa. Amaxabiso kwisitya ngasinye malunga ne-100 THB - 3 USD
Umbuki zindwendwe ngu- Krabi Riviera
We exercise careful and meticulous quality control when it comes to choosing the villas we offer. Not just any property is accepted into…
I-concierge yobuqu, ethetha isiNgesi iya kukwamkela ekufikeni kwakho kwaye isebenze njengomphathi wevilla yakho ngexesha lokuhlala kwakho. Umphathi wendlu yakho ukwifowuni ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuba nayo kwaye uyaqhagamshelwana naye ngefowuni ephathwayo ehlawulelwa kwangaphambili. Umphathi we-villa unokunikezela uluhlu olupheleleyo lweenkonzo ukusuka ekubhukheni iihambo zokuzonwabisa ukuya ekuncomeni indawo enkulu yokutyela yaseKrabi.
I-concierge yobuqu, ethetha isiNgesi iya kukwamkela ekufikeni kwakho kwaye isebenze njengomphathi wevilla yakho ngexesha lokuhlala kwakho. Umphathi wendlu yakho ukwifowuni ukuphend…
Iilwimi: 中文 (简体), English, Français, Deutsch, Русский, Svenska, ภาษาไทย